Kungani iMedium.com Ibalulekile Ngecebo Lakho Lokumaketha | Martech Zone
NgoMsombuluko, Okthoba 7, 2013 NgoLwesithathu, uDisemba 17, 2014 ULarry Alton
Amathuluzi amahle kakhulu wokumaketha online ahlala eshintsha. Ukuze uhambisane nezikhathi, udinga ukubeka indlebe yakho phansi, ukuze uthathe amathuluzi amasha kakhulu futhi asebenza kakhulu ekwakheni izethameli nasekuguqulweni kwezimoto.
Amasu wokubloga we-SEO agcizelela ukubaluleka kokuqukethwe "kwezigqoko ezimhlophe" nokwabelana, ukuze ukwazi ukusebenzisa amabhulogi ebhizinisi, amawebhusayithi egunya, ne-Twitter ukwakha idumela lakho ledijithali. Uhlelo lokusebenza lwe-Medium web njengamanje ludala ukubhuza okukhulu ngoba lunamandla okuletha izinhlobo ezifanele zababukeli kuphothifoliyo yakho eku-inthanethi.
Yini okuphakathi kuze?
Uhlelo lokusebenza lwamahhala lweMedium.com lusha sha endaweni yesehlakalo, seluvele bukhoma kuwebhu ngoJulayi 2012 ngemuva kokuthola ukusekelwa kusuka ku-Twitter. Okumaphakathi yiwebhusayithi eqhutshwa ngokuqukethwe, okuncane okuxhumanisa izethameli nama-athikili afanele futhi alusizo ezimpilweni zabo.
Okufakiwe kwebhulogi kanye nama-athikili athunyelwe ku-Medium yimibhalo ephilayo, enohlelo lokuphawula olunamandla oluvumela abafundi ukuthi bagqamise amaphuzu abalulekile futhi bengeze imibono esemajini. Zama ukucabanga inguqulo enhle kunayo yonke yesici seMicrosoft Word “Track Changes” futhi ufune ukuba nayo.
Amazwana angezwe ku-athikili yakho ayimfihlo uze uwabuyekeze bese umaka amazwana ukuze abukwe ngumphakathi. Le kungaba yindlela enhle yokuqhuba izingxoxo ezibalulekile.
Ngenkathi i-Medium isese-beta, ungaqala ngokubhalisela i-akhawunti yamahhala usebenzisa ukungena ngemvume kwe-Twitter yenkampani yakho. Kunjalo: konke kuqhutshwa yi-Twitter kuMedium.
Okuthunyelwe kwakho kuzohlanganiswa nesibambo sakho se-Twitter, okwenze kube lula ngabantu ukuthi balandele ubukhona bakho emphakathini. Abasebenzisi abaphakathi abakujabulela okuthunyelwe kwakho bangacindezela inkinobho ethi “Ncoma”, ezosiza ukuyikhuphula emazingeni e-Medium.com.
Abafundi bangabelana kalula ngokuthunyelwe kwakho ku-Twitter noma ku-Facebook feed yabo. Amazwana aboshelwe kwizibambo zawo ze-Twitter, ukuze ukwazi ukulandelela abalandeli kalula futhi ubangeze ekuxhumaneni nomphakathi.
Lapho abantu bebhala ngeMedium, bavame ukungalinaki ithuluzi lemethrikhi. Noma kunjalo, kuyasebenziseka izinombolo namagrafu ingafakwa kalula ekubikeni kwakho kwansuku zonke.
Lapho i-akhawunti yakho isivunyiwe, ungavakashela imenyu enkulu bese uchofoza ku- “Izibalo.” Lapha uzothola uhlelo lokushintshana olufaka ukubuka kwakho okuphelele, ukufundwa kwangempela, nezincomo zenyanga edlule.
Isilinganiso sokufundwa sikunikeza iphesenti lokuthi bangaki abantu ababhebhana nokuqukethwe kwakho ukuze bakubone, ngokungafani nokuchofoza kude nendatshana. Lesi sikrini sokuqala sikunikeza ukubuka okuphelele kwakho konke okuthunyelwe kwakho.
Uma ungathanda ukusondeza isithombe bese ubona izinombolo zokuthunyelwe kwakho ngazinye, mane uchofoze isihloko sendatshana. Igrafu izozilungisa ngokuzenzekelayo ukukhombisa amamethrikhi wakho wethrafikhi kuleyo ndatshana eyodwa.
Amathebhu e- “Reads” ne- “Recs” nawo angachofozwa, ukuze wakhe igrafu ebonakalayo ngayinye yalezi zigaba. Uma ubuyela kwimenyu enkulu, ungabuka umsebenzi wokuthunyelwe kwakho. Ukuchofoza kulesi sigaba kuzokukhombisa uhlu lokuthi ngubani oncome noma ubeke amazwana kokuthunyelwe kwakho, ukuze ukwazi ukuxhumana nabo ngokuhamba kwesikhathi.
Ukushicilela kwezimemo kuphela
Okwamanje, abasebenzisi kumele bamenywe yithimba labahleli beMedium.com ukuqala ukushicilela kuwebhusayithi. Ungabhalisela i-akhawunti yeReader kalula bese ungena ohlwini lokuvunyelwa komhleli. Sebenzisa isikhathi sokulinda ukufuna abanye ababhali ngaphakathi kwe-niche yakho, ubeke amazwana kokuthunyelwe okuhlobene, futhi uphakamise ukubonakala kwenkampani yakho.
Lapho usuthole isiqinisekiso esivela kwaMedium.com, ungaqala inqubo yokubhala nokushicilela. Inqubo yokuloba iyasebenzisana futhi. I-Medium ikuvumela ukuthi wabelane ngokwenziwe okusalungiswa namanye amalungu, angabeka amazwana futhi anikele kumkhiqizo wakho ophelile.
Tags: CMSuhlelo lokuphatha okuqukethwenaphakathiUkuxoxa ngezindaba